ပုသိမ် ၈၈မျိုးဆက် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကို ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလိုင်စင် မရှိဟုဆိုကာ အမှုဖွင့်
ပုသိမ်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ နိုင်ငံရေးပွဲအများစုကို မှတ်တမ်းရိုက်ကူးပေးသည့် ပုသိမ်မြို့၊ ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့၏ သတင်းပြန်ကြားတာဝန်ခံ ဦးမြင့်ကိုအား ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလိုင်စင်မရှိဘဲ ရိုက်ကူးသည်ဟုဆိုကာ ဧရာဝတီတိုင်း၊ အသည်ကြီးရဲစခန်းက မေလ ၃ဝရက် ညနေတွင် ဖမ်းဆီးကာ ထိုနေ့ည ၁၂နာရီခန့်က အာမခံဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည်။
“ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင် မရှိလို့ဆိုပြီး အိမ်မှာ ဝင်ပြီးဖမ်းတာ၊ အခွန်ဆောင်ဖို့ကို ၂၃ ရက်နေ့က အစည်းအဝေးပြောတယ်၊ မဆောင်ရင် ဖမ်းမယ်လို့တော့ပြောတယ်၊ ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် ဗွီဒီယိုရိုက်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ လုပ်တာ အခွန်ဆောင်စေချင်လို့မဟုတ်ဘူး ဖမ်းချင်လို့ လုပ်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်၊ အခွန်ကို ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးဆောင်လို့ စာထုတ်တာလည်းမရှိဘူး၊ စာနဲ့ အကြောင်းကြားထားတာမျိုးလည်းမရှိဘူး”ဟု ပုသိမ်၊ ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ဦးမြင့်ကို က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မေလ ၂၃ရက်က ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်း လိုင်စင်အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်သူ ဦးသီဟက “သူတို့ ပြောခဲ့တာ အရေးယူမယ် ဖမ်းဆီးမယ် ပစ္စည်းမသိမ်းဘူး၊ နောက်ရိုက်ကူးနေတဲ့နေရာမှာ လာရောက်ဖမ်းမယ်၊ ပွဲပြီးအောင်ရိုက်ပြီးမှဖမ်းမယ်၊ သတိပေးမယ် လိုင်စင်လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တယ်၊ အခုလုပ်တာ သူတို့ ပြောတာနဲ လုပ်တာနဲ့ မဆိုင်သလိုဖြစ်နေတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းအပြင် ပုသိမ်မြို့တွင် ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းအခွန်ကို အချို့က ၄၂,ဝဝဝကျပ်၊ အချို့က ၄၃,၅ဝဝကျပ် ပေးဆောင်ရပြီး ပြေစာစာရွက်တွင် ၃ဝ,၅ဝဝ ကျပ် ပေးဆောင်သည်ဟုသာ ရေးထားကြောင်း ဗွီဒီယိုရိုက်သူများက ပြောကြသည်။
အမှုဖွင့် ခံထားရသူ ဦးမြင့်ကိုမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ပွဲများ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ပွဲများ နိုင်ငံရေးအခမ်းအနားများကို တာဝန်ယူရိုက်ကူးပေးသူဖြစ်သည်။ ပုသိမ်မြို့တွင် ဗွီဒီယို ရိုက်ကူးသူ ၄ဝနှင့် ၅ဝအကြားတွင်ရှိပြီး လိုင်စင်မဆောင်သူများလည်း ရှိသော်လည်း ဦးမြင့်ကို တစ်ဦးတည်းကိုသာ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
“သူတို့ မှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ လုပ်တာလို့မြင်တယ်၊ အခွန်မဆောင်ရသေးတဲ့ သူတွေ အများကြီးပဲ၊ ပြီးတော့ အခွန်ဆောင်ချိန်ဆိုတာ တိတိကျကျ သတ်မှတ်ရမယ်၊ မသတ်ဘဲလုပ်တာ ဘာအတွက်လဲ”ဟု ၈၈မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့ အစည်းမှ ဦးစိုးလှိုင်ဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယင်းအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဗွီဒီယိုအခြေခံဆင်ဆာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်လှကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ တနင်္လာနေ့ ရုံးဖွင့်မှသာ ဖြေဆိုနိုင်မည်ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ဦးမြင့်ကို အား ဧရာဝတီတိုင်း၊ အသည်ကြီးရဲစခန်းမှ ပ ၁ဝ၁/၂ဝ၁၄၊ပုဒ်မ ၃၂(က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။
ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင်မရှိဘဲ စီးပွားရေး အလို့ငှာ(ဝင်ငွေရရှိ၍) ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းကို ထောင်ဒဏ် ၃နစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် တစ်သိန်း ဖြစ်စေ၊ နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်။ ယခုကဲ့သို့ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင် မရှိ၍ ဖမ်းဆီးခြင်းသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်သည်။
အာဆင်နယ် မန်နေဂျာ အာဆင်ဝင်းဂါးသည် လာမည့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့တွင် ဘန်ဇီးမား၊ ဘန်ဒါနှင့် မန်ဇူကစ်တို့ကို ခေါ်ယူရန် ပေါင်သန်း၁ဝဝ အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။မဇ္ဈိမ
ပါလက်စတိုင်း အသင်းသည် AFC Challenge Cup ဗိုလ်လုပွဲတွင် ဖိလစ်ပိုင်ကို ၁-ဝဂိုးဖြင့် အနိုင်ယူကာ သြစတြေးလျ၌ ကျင်းပမည့် ၂ဝ၁၅ အာရှဖလား ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရခဲ့သည်။မဇ္ဈိမ
နိုင်ငံရေးပွဲများတွင် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရိုက်ကူးသည့် ပုသိမ်၈၈မျိုးဆက်အဖွဲ့ ရပ်ကျေးအဖွဲ့ဝင်ကို လိုင်စင်မရှိဟုဆိုကာ မေ၃ဝရက် ညနေက ဖမ်းဆီးသွားပြီး ည ၁ဝ နာရီခန့်တွင် အာမခံနှင့် ပြန်လွှတ်လိုက်။မဇ္ဈိမ
ရန်ကုန်- မန္တလေး အမြန်လမ်း ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်လေ့ရှိသည့် နေရာများကို သမ္မတ ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီး လိုအပ်သည့် စီမံချက်များ လုပ်ရန်ညွှန်ကြားပြီးဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြော။မဇ္ဈိမ
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တို့၏တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်ရေးဖြစ်စဉ်များကို မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများက ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့တွင် မေ ၃၁ ရက်က ဆွေးနွေးကြသည်။ မဇ္ဈိမ
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး နည်းပေါင်းစုံဖြင့် ကြိုးစားနေသည့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ကာ ပူးပေါင်းလုပ်ရန် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြော။မဇ္ဈိမ
ပေါက်တဲ့အိုး ၊အနီးဆုံးလူနမ်းမှာလားတေးစီးရီးဖြင့်ပရိသတ်ကြားအောင်မြင်ခဲ့သည့်အဆိုတော်အေသင်ချိုဆွေက၎င်း၏တတိယမြောက် Play Boy အယ်ဘမ်ကိုဇွန်၂၁ရက်၌ထွက်ရှိမည်။မဇ္ဈိမ
အဆိုတော်စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်သည်မေ၂၆၌ နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် စာသားတချို့ ရေးပြီးနောက်ပိုင်း မေ ၃ဝ ရက် တွင် ၎င်းအသုံးပြုနေသည့် ဖေ့ဘုတ်ကို ပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ မဇ္ဈိမ
မန္တလေး ဘောလုံးအကယ်ဒမီ အတွက် ရွေးချယ်ထားသည့် ကစားသမား ၄၂ ဦးအနက်မှ ၂ဦးကို အသက်မမှန်သောကြောင့် ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။မဇ္ဈိမ
မန္တလေး အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ဂက်(စ်) မီးခြစ်စက်ရုံအတွင်း ယနေ့ညနေ ၃နာရီခွဲအချိန်က မီးလောင်
မန္တလေး အောင်မြေသာစံမြို့နယ် အမရဌာနေအရှေ့ရပ်ကွက် ရပ်ကွက်၄၁၅ N3 ရှိ ဂက်(စ်) မီးခြစ်စက်ရုံအတွင်း ယနေ့ညနေ ၃နာရီခွဲအချိန်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းဓာတ်ပုံ - စူပါ၊ ဇော်ဇော်
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကတဆင့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ သမ္မတအကြံပြု
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကနေရရှိတဲ့ သဘောတူညီချက်တွေပေါ် မူတည်ပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်၊ ပယ်ဖျက်၊ ဖြည့်စွက်ရေးသားတာတွေ ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ တိုင်းပြည်ကို လစဉ်ပြောကြားတဲ့ ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတက အခုလို အကြံပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
"ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို အခြေပြုတဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမျိုးမှ ပေါ်ပေါက်လာသော သဘောတူညီချက်များအပေါ် မူတည်ြပီ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးမားမှုနဲ့ စိတ်ရင်းစေတနာ မှန်ကန်မှုတို့က အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်"
ဒါ့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံကို နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးမှု၊ ဥာဏ်ပညာကြွယ်ဝမှုနဲ့ စိတ်ရင်းစေတနာ မှန်ကန်မှုတွေနဲ့သာ ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်းနဲ့ မည်သည့်နိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားတွေကိုမှ နိုင်ငံရေးအရ ဦးဆောင်နိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားတာ မဖြစ်စေလိုကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား နဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကို မထိပါးရေး အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေခံတွေရှိဖို့ လိုအပ်ကြောင်းလည်း သမ္မတက ထည့်သွင်းပြောသွားခဲ့ ပါတယ်။
ငွေ သိန်း ၁၀၀ ကောက်ရသော်လည်း အသက်အန္တရာယ်ကြားက ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်ပို့နိုင်ခဲ့သူ လေးစားထိုက်သူ ဆိုက်ကားဆရာ ဦးစန်းဝင်း
ငွေထုပ်သိန်းတစ်ရာ ကောက်ရမိသူ ဦးလေးအတွက်
ဘဏ်သူဘဏ်သားပေ့ထဲမှာ ရှိကြသော မန်ဘာများအားလုံး Share လုပ်ပေးကြရင်း ဂုဏ်ပြုလိုက်ရအောင်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြိဲု့ န၀င်းကမ်းနားလမ်းနေ
ဦးစန်းဝင်း(ဆိုက်ကားဆရာ/နိဗာန်ဆော်) ဆိုသူ ဆိုက်ကားနံပါတ် 1661 ဖြင့်
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေသော ဆိုက်ကားဆရာ၏ စိတ်ဓါတ်
ဆိုက်ကားဆရာ ဆိုတာ အင်္ကျီ အနွမ်းလေးဝတ် ဦးထုပ်အဟောင်းလေးဆောင်းပြီး နေပူပူမှာ ဘ၀ ၀မ်းစာရေးကို ဖြေရှင်းနေကြပေမဲ့ အနေစုပ်ပေမဲ့ စိတ်ဓါတ် မညံကြတဲ့ နိုင်ငံကြီးသား အဆင်မြင့် စိတ်ဓါတ်ရှင် ပြည်မြို့က ဆိုက်ကားဆရာ တစ်ယောက်အကြောင်းကို တင်ပြချင်ပါတယ်
မနေ့က (30) ရက်နေ့က လစာထုတ်ရက်ဆိုတော့ စီးပွားရေးဘဏ်မှာ လစာထုတ်သူများ နဲ့ စည်ကားနေတဲ့ အချိန် ၊ လူရှုပ်နေတဲ့ အချိန်ပါနေ့လည် ပိုင်းမှာ ဌာနဆိုင်ရာ တစ်ခုရဲ့ ငွေစာရင်းကိုင် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးအား စီးဘဏ်ရှေ့ က ပီစီအို ဘေးမှာ သူ တာဝန်ယူထုတ်လာတဲ့ ၀န်ထမ်းလစာ သိန်း (၉၀) ကျော် အထုပ်ကို ဘေးချပြီး ဖုန်းဆက်နေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူတို့ဌာန ကားက ရောက်လာတာမို့ အလောသုံးဆယ် ကားပေါ်တက်လိုက်လာပါတယ် ဒု-၀န်ကြီးလည်း ဆိုင်းမဆင့် ဘုံမဆင့် ရောက်လာတာမို့ ကားပေါ်ပါလာသူတွေရော သူကိုယ်တိုင်ပါ စိတ် လောနေကြပါတယ် ဌာနကို ရောက်ရှိပြီး အခန်းထဲရောက်လို့ ငွေထုပ်ကို ကြည့်တဲ့အခါမှ သိန်း (၉၀) ကျော်ငွေထုပ်ဟာ စီးဘဏ် ရှေ့ ပီစီအိုဘေးနားမှာ ကျန်ခဲ့ ကြောင်းသိရတဲ့အတွက် အားလုံး ခေါင်းနပန်း ကြီးကုန်ကျပါတယ်။ ချက်ချင်းပဲ ကားပြန်လှည့်ပြီး ဘဏ်ကို သွားနေပေမဲ့ ဆုံးပြီ၊ ဒီငွေတွေကို ဘယ်လို ပြန်ရှင်းမလဲ ဆိုပြီး စိတ်ပူချင်းများစွာနဲ့ သွားနေရသလို ရုံးက ၀န်ထမ်းတွေကလည်း စိတ်မကောင်းချင်းများစွာနဲ့ ကျန်ခဲ့ ရပါတယ်
အဲဒီကျွပ်ကျွပ် အိတ် အထုပ်ကို ဘဏ်ဘေးက ဆိုက်ကားဂိတ်က ဆိုက်ကားဆရာ တစ်ဦးက ဖွင့်ကြည့်ပြီး ငွေထုပ်ဖြစ်ကြောင်းသူသိသွားပါတယ် ငွေစည်းတွေရဲ့ အပေါ် မှာ ပန်းတောင်း လို့ ရေးထားတဲ့အတွက် ပန်းတောင်းကားဂိတ်ကို လိုက်ပေးပါတယ် ကားဂိတ်ကလည်း ငွေထုပ်ပျေက်တဲ့ သူ မရှိတာမို့ ဘဏ်ကို ပြန်ယူလာခဲ့ပါတယ်
အဲဒီအချိန်မှာပဲ နောက်က လူ (၃) ဦးက လိုက်လားပြီး သူတို့ ငွေထုပ်ပါ ဆိုပြီး လိုက်ပြောပါတယ် မပေးရင် အန္တရာယ်ပြုမဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ပါ
ဆိုက်ကား ဆရာ က လည်း မင်းတို့ ပိုက်ဆံဆိုရင် ရဲဆီမှာ လိုက်ယူပါ ရဲကိုပဲ အပ်မယ် ဆိုပြီး ဘဏ်က ရဲနဲ့ ဘဏ် မန်နေဂျာ လက်ထဲ အပ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီလူ (၃) ဦးလည်း မယောင်မလည်နဲ့ ပြန်သွားကြပါတယ်
မျက်ရည်တွေနဲ့ စိတ်ပူပန်ချင်းတွေနဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြလို့မရတဲ့ သောက တွေနဲ့ ဘဏ်ကို ရောက်လာတဲ့ အမျိုးသမိး ဟာ ရောက်ရောက်ချင်း သူ့ ဆုံးပြီ ပြသနာတက်ပြီ လို့ ထင်ထားတဲ့ ငွေထုပ်ဟာ ဘဏ် မန်နေဂျာ ဆီကို ရောက်နေပြီလို့ သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် အရမ်းကို ပျော်သွားပါတယ်
ဦးစန်းဝင်းမှာ ကားဂိတ်တွေမှာ လိုက်ရှာမရတဲ့အဆုံး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် လုံခြုံရေးရဲဝန်ထမ်းမှ တဆင့် မန်နေဂျာထံသို့ ပေးပို့အပ်နှံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
သူ သိန်း ၁၅၀၀ ထီပေါက်ရင်တောင် အခုလောက် ပျော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
သူမ ဟာ ဘဏ်မှာ ငွေ အမြဲလာထုတ်နေတာရယ် သူ့ဌာန ၀န်ထမ်းလစာဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်တာရယ် ကြော င့် သူမကို ပြန်ပေးလိုက်ပါ တယ်
ဆိုက်ကားဆရာ ကို ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ သူမ ယခုလ ရမည့်လစာ (မေလ/၁၄)လအတွက် ငွေ တစ်သိန်းကို ကန်တော့ပါတယ် ရိုးဂုဏ်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ရော ကျေးဇူးရှင် တစ်ယောက် အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုတဲ့ အနေနဲ့ရော ပဆစ်တုပ်ထိုင်ပြီး ဦးချ ကန်တော့ခဲ့ပါတယ် ဆိုက်ကားဆရာ ရင်မှာတော့ ပီတိတွေနဲ့ပါ ငွေ ၁ သိန်းကို မယူပါဘူး အတင်းငြင်းပေမဲ့ ကျေးဇူးရှင်မို့ပါဆိုပြီး လက်ခံပါ အတင်းပြောခဲ့ရပါတယ်
ဒိငွေ တစ်သိန်းထက် ကျေးဇူးရှင် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမှုက သူ့ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး ရိုးဂုဏ် ကို ထိန်းသိမ်းတော့မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ တွန်းအားကြီး တစ်ခုပါ ဘဏ် မန်နေဂျာ အပါအ၀င် အားလုံးရဲ့ ရင်မှာ ၀မ်းသာ မျက်ရည်စတွေနဲ့ရယ်ပါ ငွေထုပ်လက် ခံပြီး ဘဏ် မန်နေဂျာ ဆီ လိုက်ပို့ပေးတဲ့ ရဲ တပ်သားလေးကိုလည်း မုန့်ဖိုး ၁ သောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ ဘဏ်သူဘဏ်သားများ အဖွဲ့သားများမှလည်း ဦးစန်းဝင်းကြီး
မိသားစုနှင့် ထပ်တူ ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ လေးစားမိပါသည်။
ဂုဏ်ယူအားကျဖွယ် ဆိုက်ကားဆရာဦးလေးကြီး ဦးစန်းဝင်း LiKe . Share . Comment များဖြင့်ဂုဏ်ပြုပေးကြပါအုန်း
ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့လင်မယားက့့ နေ့ကမှ လက်ထပ်ထားတာပါ။ အဲ့ဒါနဲ့ OK တားဆေးရောင်းတဲ့သူကပြောတယ်။ အဲ့ဆေးစားပြီးရင် ၇ ရက်ကျော်မှစိတ်ချရတာပါတဲ့။
• လူအများဆုံးသုံးတယ်။ ဈေးချိုတယ်။ ရှာရတာလွယ်တယ်။
• Estrogen နဲ့ Progestin ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါတဲ့ တလစာ ၂၈ လုံးပါတဲ့ကိုယ်ဝန်တားဆေးဖြစ်တယ်။
• ဆေးလုံး အရောင် ၂ မျိုးရှိမယ်။ ၂၁ လုံးကအရောင်တမျိုး၊ ၇ လုံးကအရောင်တမျိုး။ ၂၁ လုံးမှာသာ ဟော်မုန်းတွေ ပါတယ်။
• တားဆေးကို ပဌမဆုံးသောက်သူဆိုရင် ရာသီစလာတဲ့နေ့ကနေ စသောက်ရင် တလလုံးအတွက် ကာကွယ်မှုရမယ်။ ရာသီရပ်ပြီးမှ စသောက်ရင်တော့ ဆေးသောက်စ ၇ ရက်အတွင်း စိတ်မချရသေးပါ။ အတူမနေတာ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ဒွမ် သုံးရမယ်။
• တကယ်လို့ တတိယပတ်မှာ ဆေးသောက်ဘို့ ၂ ရက်ဆက်မေ့သွားရင် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ရက်သတ္တပတ်မှာဖြစ်ဖြစ် ဆေးသောက်တာ ၃ ရက်၊ ဒါမှမဟုတ် ၃ ရက်မက မေ့သွားရင် ကျန်တဲ့ဆေးကပ်ကို ဆက်မသောက်ဘဲ၊ ဆေးကပ်သစ် စသောက်ပါ။ တပြိုင်နက်တည်းမှာ ၇ ရက်တာ အရံတားနည်းတခုခုသုံးပါ။ အဲဒီလမှာ ရာသီ မလာဘဲနေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ဆေးကို (အလားဂျစ်) ဖြစ်သူ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနေသူ၊ အသဲရောဂါရှိနေသူ၊ မျက်စိ သွေးကြောရောဂါရှိသူ၊ နှလုံး (အတက်) ရဘူးသူ၊ အီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ ဥပမာ ရင်သားကင်ဆာရှိသူ၊ သွေးကြောပိတ်ရောဂါရှိသူ၊ အသဲကင်ဆာ၊ နှလုံး-ဦးနှောက် သွေးကြောပိတ်ဘူးသူ၊ မိုင်ဂရင်းရောဂါရှိသူ၊ သရက်ရွက်ရောင်နေသူ၊ အသဲရောင် အသားဝါရှိနေသူ၊ မွေးလမ်းကနေ သွေးဆင်းတာ အကြောင်းရှာမရသူတွေ ဒီဆေးမသောက်သင့်ပါ။
• ဝမ်းလျှောနေတာ၊ အန်တာ၊ ပိုးသေဆေးသောက်ထားရင် ဆေးထိရောက်မှုကို သက်ရောက်နိုင်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် သိပ်များသူတွေမှာလဲ ထိရောက်မှုနည်းနိုင်တယ်။
စိတ်မနှံသော မောင်ချဉ် နှင့် မိဂျမ်း တို့နှစ်ယောက် စကားလက်ဆုံပြောနေကြလေသည် ။
မောင်ချဉ် ။ ။ " နင့်ကို အရေးကြီးတဲ့ စကားပြောစရာရှိတယ် "
မိဂျမ်း ။ ။ ဘာတုန်း !! " ပြောစရာရှိရင်လည်း မြန်မြန် ပြောဟာ "
မောင်ချဉ် ။ ။ " ငါ ...နင့်ကို တိုးတိုးလေး ပြောပြမယ်နော် " ၊ " နင် ဘယ်သူ့ကိုမှ လျှောက်မပြောရဘူးနော် "
မိဂျမ်း ။ ။ ငွင် !! " နင့် စကားက ဘာစကားမို့လို့တုန်း "
မောင်ချဉ် ။ ။ ဒီလိုဟ ~~ " ငါ က ကွမ်ရင်မယ်တော်ရဲ့သား အငယ်ဆုံးဟ "
မိဂျမ်း ။ ။ ဟာာာ ~~ " နင် လျှောက်ပြောမနေနဲ့ ၊ ငါ ဘယ်တုန်းကမှ နင့်လိုသားမျိုး မွေးခဲ့မိလို့လဲ "
'' မောင်ရေ ...
မတို့ရဲ့ အိမ်ရှေ့ကအိမ်ကို လူငယ်ချောချော
တစ်ယောက်ပြောင်းလာတယ် ၊ အဲဒါ ' မ '
အဝတ်အစား လဲတဲ့ အခါ သူမမြင်အောင် ပြတင်းပေါက်မှာ ခန်းဆီးတပ်လိုက်ရင် မကောင်း ဘူးလားဟင် ''
ဟု ကိုချဉ် အား သူ့ အိမ်သူ သက်ထား
မှ ပြောလေသည် ။
'' မလိုပါဘူးကွာ ၊ မင်း အဝတ်အစား ချွတ်တာကို သူတခါမြင်တာနဲ့ သူ့ဟာသူ ခန်းဆီး
Jam : The Web Design Company that Teaches You English
၅. မျက်နှာစိမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခြင်း(Meeting New People)
ဒီနေ့ဟာ Sanjeev တစ်ယောက် Jam ကိုရောက်တဲ့ပထမဆုံးနေ့ပါ။ သူဟာ သူ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်နေပါတယ်။
"Sanjeev မင်းကို Jeef Delini နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ သူကအရမ်းတော်တဲ့ Designer လေ။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်သူလည်း ဖြစ်တယ် တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် လည်း တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် ပြီးတော့ ဒါက Maria Sanchez ပါ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ Office Manager ပေါ့။ သူကစပိန်နိုင်ငံကပါ။ တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် Maria တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင် အဲ့ဒီနောက်တော့ Sanijeev ဟာသူရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အသစ်တွေအကြောင်း ပိုသိလာဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။
ကျွန်တော်က websites တွေကို ဒီဇိုင်းဆွဲပေးရတယ်။ ပြီးတော့သူများတွေ နားမလည်တဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရတယ်ပေါ့ဗျာ
"Maria ခင်ဗျားရော ဒီမှာဘာလုပ်ရလဲ ကျွန်မကတစ်ရုံးလုံးကို လည်ပတ်အောင်လုပ်ရတယ်။ ဖုန်းဖြေတာကအစ စာရင်းအင်းတွေကို ကြည့်ပေးတာအထိ အကုန်လုံးပါပဲဟာ၊ ခင်ဗျားတော်တော် အလုပ်များမှာ ပဲနော်ကဲ Sanjeev တစ်ယောက် မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို လာလည်တယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါမယ်။
Sanjeev နဲ့စကားပြောရအောင်လို့ ကိုယ်ပြောမယ့် အပိုင်းလေးတွေကို ချရေးကြည့်ပါဦး။ ဟဲလို။ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် ခင်ဗျားဒီမှာ ဘာလုပ်ရသလဲ ဒီမှာအလုပ်လုပ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ သိတဲ့ စာလုံးတွေရှိရင်လည်း အဘိဓာန်ကို သုံးပါနော်။
ကဲ။ သူတို့ပြောသွားတဲ့ စကားတွေကို နည်းနည်းအသေးစိတ် လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ကိုယ်ကအခြားမျက်နှာစိမ်း နှစ်ယောက်ကို သူတို့အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ရင်May I introduce you to (Name).This is (Name).
မိတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့မှ သူတို့အကြောင်းလည်း နည်းနည်း ထပ်ပြောပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
He'sabrillant designer, and our computer expert.
And this is Maria Sanchez, our office manager.
ဒီနေရာမှာ လောလောဆယ် ကိစ္စကိုပြောတာမို့လို့ "simple present tense" ကိုသုံးပါတယ်။
သူများက မိတ်ဆက်ပေးပြီးရင် ကိုယ်ကဒီလိုပြန်ပြောကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ခုမှတွေ့တာမို့လို့ 'Meet' လို့သုံးတာပေါ့။ သိပြီးသားသူချင်းတွေ့ရင် "Pleased to see you" လို့သုံးပါတယ်။
A. For about two years.
မေးခွန်းက အလုပ်စဝင်တဲ့ အချိန်ကနေပြီး အခုထိလို့မေးချင်လို့ Present Perfect (have + past participle) သုံးပြီးမေးထားပါတယ်။ ကြာမြင့်ချိန်အရှေ့မှာ for ထည့်ပြီးဖြေသွားတာကို သတိပြုပါ။
Q. What do you do here?
A. I design websites and do the technical stuff that no one understands.
A. I run the office, everything from answering the phone to looking after the accounts.
ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကလည်း နေ့စဉ်လုပ်ငန်း အကြောင်း ပြောတာဖြစ်လို့ "Simple Present tense" ပါပဲ။
ဒီစာဖတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ကြည့်ဦးနော်။
ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်စွာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူနိုင်ပါစေ။
(Daw May May Win, MA (English) (YU), MA (TESOL) (Lancaster University) မှ မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆို ရေးသားထားပါသည်။)
အဖြစ်များသော ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများ
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အောက်ဆီဂျင် နည်းလာတဲ့အခါ သင့်ပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်စေပြီး လေတွေကို ပိုများများစုပ်ယူဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါကိုသမ်းတယ်လို့ သိထားကြပါတယ်။ သမ်းတာဟာ သင့်ရဲ့ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ အောက်ဆီဂျင်တွေရဲ့ ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ လူကြားထဲမှာ သမ်းချင်တဲ့အခါ ထိန်းချုပ်အောင့်အည်းလို့ မရပါဘူး။
အရေပြားဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ ခြောက်သွေ့မှုကြောင့် မကြာခဏယားယံနိုင်ပါတယ်။ ဆပ်ပြာနဲ့ ရေသုံးပြီး အလွန်အကျွံ ဆေးကြောခြင်းကလည်း အရေပြားက သဘာဝအဆီတွေကို ဖယ်ရှားပစ်တဲ့အတွက် အစိုဓာတ်ခန်းခြောက်လာကာ ယားယံစေပါတယ်။ အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကြောင့် ယားယံခြင်းကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် မျက်နှာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိုးရှင်းလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆပ်ပြာတွေနဲ့ ကိုယ်တိုက်
ဆပ်ပြာရည်ဝယ်တဲ့အခါ အစိုဓာတ် ထိန်းပေးတယ် (Moisturizing) စာတန်းပါတာကို ရွေးဝယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်မှာ ယားယံနေတဲ့အကွက်တွေ ရှိနေသေးရင်တော့ ဓာတုပစ္စည်း၊ အပင်၊ အစားအစာ၊ တိရစ္ဆာန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးတွေကို ဓာတ်မတည့်တုံ့ပြန်မှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယားယံတာက မပျောက်နိုင်ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြပါ။
မျက်စိကို ထိန်းချုပ်လို့မရဘဲ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် လှုပ်နေတာ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုခုရဲ့ လက္ခဏဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတရံ မထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျက်စိဆန့်ငင်ဆန့်ငင် လှုပ်ခြင်းရဲ့ အဖြစ်များတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၊ အကြာကြီး ငေးစိုက်ကြည့်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် မျက်စိညောင်းညာခြင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရင်ဆုံး စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့တာ၊ ကဖင်းလျှော့သောက်တာနဲ့ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်တာတွေ အရင်လုပ်ကြည့်ပါ။ မပျောက်ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြပါ။
သင်ဟာ မကြာခဏကြို့ထိုးတတ်ရင် အစာစားတဲ့အခါနဲ့ အရည်သောက်တဲ့အခါ ဖြည်းဖြည်းချင်းသာ စားသောက်ပါ။ အလွန်မြန်မြန်စားသောက်ခြင်းဟာ အစာအိမ်ကို ဖောင်းကားစေပြီး ရင်ဝမ်းခြားကြွက်သားကို လှုံ့ဆော်တဲ့အတွက် အဲဒီကြွက်သားကျုံပြီး ကြို့ထိုးတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြို့ထိုးတာဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ ဒါမှမဟုတ် အပူချိန် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခါတွေမှာ သင်ရဲ့ အာရုံကြောတွေမှာ ရှုပ်ထွေးမှားယွင်းမှု ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြို့ထိုးလာတာဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက်လန့်သွားတဲ့အခါ အာရုံကြောတွေကို နာနာလှုပ်ပြီး ပြန်ချိန်ပေးသလိုဖြစ်တဲ့အတွက် ကြို့ထိုး ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
သင်ဟာ အေးတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ကြောက်လန့်တဲ့အခါ ကြက်သီးမွေးညင်း ထတာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံကာကွယ်တဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားနဲ့ မွေးညင်းအိတ်ကို ဆက်ထားတဲ့ ကြွက်သားသေးလေးတွေ ကျုံပြီး အရေပြားပေါ်က အမွေးအဆုံးကို ထောင်စေတဲ့အခါ ကြက်သီးမွေးညင်း ထလာတာပါ။ ကမ္ဘာဦးလူသားတွေကတော့ အခုခေတ်လူတွေထက် အမွေးတွေ ထောင်သွားတဲ့အခါ လေကိုဖမ်းယူပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို နွေးထွေးစေပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေ ရန်မူတဲ့အခါ အမွေးတွေထောင်သွားခြင်းကြောင့် တိရစ္ဆာန်တွေကို ကြောက်လန့်အောင် ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကို နှာခေါင်းတွင်းမှ ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ နှာခေါင်းတွင်းမှ ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ နှာချေတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ ဓာတ်မတည့်မှု ပြဿနာရှိရင် ပန်းဝတ်မှုန်တွေနဲ့ တိရစ္ဆာန် အညစ်အကြေးတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ အအေးမိရောဂါဖြစ်နေရင်တော့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို ဖမ်းယူဖို့ ချွဲသလိပ်တွေကို ပိုထုတ်ပေးပြီး နှာချေခြင်းနည်းနဲ့
ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ကို ထုတ်ပစ်ပါတယ်။ အအေးမိပျောက်ဆေးနဲ့ ဓာတ်မတည့်ပျောက်ဆေးတွေက နှာချေတာကိုဖြစ်စေတဲ့ ချွဲသလိပ်ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့နည်းစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်မတည့်ဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်က တုံ့ပြန်မှုကို ဖိနှိပ်တာပါ။
ချောင်းဆိုးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မကောင်းတဲ့အရာတွေကို ထုတ်ပစ်တဲ့ နောက်ထပ်စနစ်တစ်ခုပါ။ သင်ရဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ အထူးဆဲလ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒီဆဲလ်တွေက အနှောင့်အယှက်ပေးမယ့် အရာတွေကို သိရှိပြီး အားနဲ့ဖယ်ထုတ်ပစ်တာပါ။ အအေးမိခြင်း၊ နှာခေါင်းတွင်း လိုဏ်ခေါင်းမှာ ပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ နမိုးနီးယားရောဂါတွေဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချွဲသလိပ်ထုတ်လုပ်မှုကို ပိုများစေပြီး ချောင်းဆိုးစေပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါတွေကလည်း ဆဲလ်တွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နာတာရှည် ချောင်းဆိုးနေတဲ့ ပြဿနာကို လျော့နည်းစေဖို့အတွက်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်ဟန်အနေအထားဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ပွင့်နေအောင် ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
ရုတ်တရက်ကြွက်သားနာကျင်ပြီး ကြွက်တက်တာဟာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တာ ဒါမှမဟုတ် ပြင်းထန်တဲ့ အားကစားလုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဓာတ်ဆားတွေ မညီမျှတာအပါအဝင် အကြောင်းအချက် များစွာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကြာရှည်ပြေးပြီး ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး နောက်မှာ အားကစားသမားတွေ သောက်ရတဲ့အချိုရည် (Sports Drink) သောက်တာဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ် စနစ်တွေကို ချောမွေ့လွယ်ကူစေပါတယ်။ နာကျင်မှု သက်သာဖို့ အတွက်တော့ လမ်းလျှောက်ပေးပါ။
ချမ်းတုန်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး တဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေခြင်းပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် အလွန်အမင်း ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တုန်လာပြီး အပူကို ဖြစ်စေတာပါ။ ဒီလိုချမ်းတုန်တာကို ကုသဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကတော့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို ၉၈ ဒဿမ ၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ပြန်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။
အလယ်နားမှာ အရည်ရှိနေခြင်း ဒါမှမဟုတ် ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် နားအူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီးအဖြစ်များတဲ့ အကြောင်းကတော့ သင်ရဲ့ အကြားအာရုံကြော အဆုံးကို ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် အလွန်ကျယ်လောင်တဲ့ ဆူညံသံကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း နားလေး သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင် စင်မြင့်ဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေကို သွားတဲ့အခါ နားဆို့တပ်ထားပါ။
အစာ၊ ရေနဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေဟာ သင်ရဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ဖြတ်သွားတဲ့အခါ အစာအိမ်ကြွက်သားတွေနဲ့ အူကြွက်သားတွေက ကျုံ့ပြီး အသံထွက် စေနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ အစာအိမ်က အစာခြေနေစဉ်မှာ အသံထွက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်ကျယ်လောင်တဲ့ အသံထွက်နေရင်တော့ သံလွင်ဆီလက်ဖက်စားဇွန်းတစ်ဇွန်း ဒါမှမဟုတ် Herbal Tea တစ်ခွက်ကို သောက်ပေးရင် သက်သာနိုင်ပါတယ်။
ခြေ၊ လက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုပေါ်မှာ ကြာရှည်ဖိထားတဲ့အခါ ကျဉ်တတ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ခြေထောက်ကို ဖိပြီး အကြာကြီးထိုင်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် လက်ကိုဖိပြီး အကြာကြီးအိပ်မိတဲ့အခါ အဲဒီနေရာမှာကျရောက်တဲ့ ဖိအားက သင်ရဲ့အာရုံကြောတွေကို ညှစ်ထားပြီး ဦးနှောက်ကို ပေါက်တတ်ကရ သတင်းတွေပို့ပေးပါတယ်။ ဦးနှောက်က ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက် ဒီရောထွေးနေတဲ့အတင်းတွေက အဲဒီနေရာမှာ ခံစားမှု ပျောက်သွားစေပါတယ်။ ခြေလက်ကျဉ်တာကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်တော့ အာရုံကြောတွေကို ဖိမိတဲ့အနေအထားမှာထိုင်တာ ဒါမှမဟုတ် အိပ်တာကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ပါ။
သင်ဟာအိပ်နေရာကနေ အလွန်မြန်မြန်မတ်တတ်ရပ်လိုက်တဲ့အခါ သင့်ခေါင်းကို အထိုးခံလိုက်ရသလို ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါက ဒုက္ခပေးသလိုမျိုး ခံစားရပြီး မျက်စိထဲမှာ ကြယ်တွေမြင်သွားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း အသီးသီးဆီကို သွေးတွေ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးထွက်သွားတာကြောင့်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဒီလိုမျက်စိထဲအလင်းပွင့်တွေမြင်ရတာဟာ စက္ကန့်အနည်းငယ်သာ ကြာပါတယ်။ သင်ဟာ အချိန်ခဏထက်ပိုပြီး ကြယ်တွေမြင်နေရရင်တော့ သင်ရဲ့မျက်စိအာရုံခံလွှာမှာ စုတ်ပြဲနေတာ ဒါမှမဟုတ် သွေးခဲလေးသေးလေး ရှိနေတာ ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်ဆီ ချက်ချင်းသွားပါ။
“လိင်ဆက်ဆံမှုပြုတိုင်း (ကွန်ဒွမ်) ကို စနစ်တကျသုံးခြင်းဟာ HIV ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ တခုထဲသော အကောင်းဆုံးနည်း ဖြစ်တယ်” လို့ UNAIDS, WHO, UNFPA ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ အမြင့်ဆုံး ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက ထောက်ခံချက် ပေးထားတယ်။
(ကွန်ဒွမ်) ကို အသုံးပြုနည်းလဲ မှန်ရမယ်။ စဉ်ဆက် မပြတ်စေရဘူး။ နည်းအမှန်ဆိုတာ ဘာလဲ။ လိင်တခါ ဆက်ဆံတိုင်း (ကွန်ဒွမ်) အသစ်ဖြစ်ရမယ်။ (ဗဂျိုင်းနား)၊ ပါးစပ်၊ စအို ဘာကိုမှ မထိရသေးခင် ကျားအင်္ဂါသန်မာတာနဲ့ စွပ်ပါ။ စွပ်တဲ့အခါ၊ (ကွန်ဒွမ်) ရဲ့ အရင်းကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး၊ လိင်တံတခုလုံးအပေါ် ဖုံးစေပါ၊ လေမခိုအောင် ဂရုစိုက်ပါ၊ အဖျားမှာတော့ ထွက်လာမဲ့ သုတ်ရည်အတွက် နေရာကျန်နေအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ဒီနေရာကလွဲရင် လိင်တံတခုလုံးပေါ်မှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကပ်နေပါစေ။
Latex condoms (လေးတက်စ်-ကွန်ဒွမ်) ဆိုရင် ချောဆီ မလိုပါ။ မဟုတ်ရင် ရေအခြေခံ-ချောဆီကိုသာ သုံးပါ။ K-Y Jelly က အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ဆီအခြေခံတွေဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ဆီ-ချောဆီ၊ (ဗက်ဆလင်း)၊ Hand lotion လက်-လိုးရှင်း၊ Baby oil ကလေးကိုယ်လိမ်းဆီ၊ တခြား ဘယ်ဆီအမျိုးအစားကိုမှ မသုံးရပါ။ Silicone lubricant (စီလီကွန်) ချောဆီက အဝတ်အစားကို စွန်းထင်းစေတယ်။
ဆန္ဒပြည့်ဝလို့ သုက်ရည်ထွက်ပြီးတာနဲ့ ကျားအင်္ဂါ နဂိုအနေ ပြန်မရောက်ခင်မှာ (ကွန်ဒွမ်) ကို ချွတ်ပါ။ ချွတ်တဲ့အခါ အထဲက သုတ်ရည်တွေ တစက်မှ ဖိတ်မကျစေပါနဲ့။ မ-အင်္ဂါထဲ ကျွတ်ကျန်မနေစေပါနဲ့။ ဒီအခါမှာလဲ တယုတယလုပ်ပါ။
၉၈% ထိရောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မထိရောက်မှု (ကိုယ်ဝန် မတားနိုင်တာ၊ ရောဂါ မတားနိုင်တာ)၊ ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာ သုတေသန ရလဒ်တွေက မတူကြပါ။ (ကွန်ဒွမ်) အမျိုးအစား၊ အရည်အသွေး၊ စွပ်နည်း-ချွတ်နည်း၊ အချိန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် သုံးတာ ဟုတ်-မဟုတ်၊ (ကွန်ဒွမ်) မသုံးခင်ကတည်းက ရောဂါ-ကိုယ်ဝန် ရှိနေ-မနေ၊ စတာတွေပါ ထည့်စဉ်းစားရလို့ မတူတာဖြစ်ပါတယ်။
(ကွန်ဒွမ်) ကို အပိုလုပ်ပေးထားတဲ့ အရောင်၊ အနံ့ စတာတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် သက်ရောက်မှု မရှိပါ။ (လေးတက်စ်-ကွန်ဒွမ်) နဲ့ မတည့်သူတွေက Polyurethane Condom (ပေါ်လီယူရီသိန်း-ကွန်ဒွမ်) သုံးရတယ်။ Female Condom အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒွမ်) လဲ ရှိပါတယ်။ (ပေါ်လီယူရီသိန်း) နဲ့ လုပ်ထားတာပါ။
သုံးနေရင်းနဲ့ (ကွန်ဒွမ်) ပေါက်သွားရင် ရောဂါကာကွယ်ဘို့ သုံးသူက အသစ်လဲရမယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ သုံးသူဆိုရင် အရေးပေါ်တားနည်း Emergency contraceptive (EC) လုပ်ရမယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး တခုခု သုံးနေသူနေပေမဲ့ တကယ်လို့ ကိုယ့်အဖေါ်အကြောင်းကိုမသိရင် ရောဂါတွေကာကွယ်ဘို့ရာ (ကွန်ဒွမ်) ကိုပါ သုံးရမယ်။ တကယ်လို့ HIV ပိုးရှိနေသူနဲ့ ဆက်ဆံနေရင်း (ကွန်ဒွမ်) ပေါက်ပြဲသွားရင် Antiviral therapy ဆေး သောက်ရပါမယ်။
ဒီအကျင့်ကြောင့်လည်း.. သူငယ်ချင်း မိန်းခလေးတွေနဲ့.. ပြဿနာ တက်ပေါင်းများပီ…
သူတို့ပြောတာတစ်မျိုး.. ကိုယ်တွေနားလည်တာက တစ်ခြား…
တစ်လွဲတွေ ဖြစ်တတ်လွန်းလို့ အခင်အမြင် ပျက်ရပေါင်းလဲ များခဲ့ ပါပီ…
ဟိုတစ်နေ့ကပဲ.. online ပေါ်မှာ သူငယ်ချင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ပြည်က ကောင်မလေး မြန်မာပြည်ကို လာလည်တော့.. အပြင်မှာ တွေ့ဆုံကြတာပေါ့..
မြန်မာစကားသိပ်မပြောတတ်တော့.. စကားပြန် တစ်ယောက်လည်း ပါလာတယ်…
ကျနော်လည်း.. ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်အောင် ဟိုဟို ဒီဒီ လိုက်ပို့ရတာပေါ့ဗျာ…
စကားပြောတဲ့အခါကျတော့လဲ.. ကျနော်က မတတ်တခေါက် စပီကင်လေးနဲ့ ပြော သူမကလည်း မပီကလာပီကလာ စပီကင်နဲ့ ပြော.. လုံးခြာပတ်ခြာလိုက်ပီး.. သူ့စကားပြန်က ဖြေရှင်းပေးလို့သာ တောရော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့.. သူမလည်း ဟိုတယ်ပြန်ရမယ့် အချိန်ရောက်တော့ သူမကို ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ် တောင်းလိုက်တော့..
” Sex Sex Sex , Free Sex To Night…! ”
” ဝှားးးးးးးး ”
တံတွေးကို.. ဂလုခ်.. ကနဲ မြိုချလိုက်ရင်း.. တုန်တုန်ရီရီနဲ့.. မေးလိုက်မိတယ်…
ကျနော့ မျက်နှာ အမူအရာကို ကြည့်ရင်း သဘောပေါက်သွားတဲ့ စကားပြန်က ကဗျာကယာ ဖြေရှင်းရှာတယ်…
” ဟုတ်ပူး..ရှင့်.. သူပြောချင်တာက သူ့ဖုန်းနံပါတ်.. 6663629 ပါ..တဲ့..”
ယနေ့(မေလ ၃၁) ရက်မှ စတင်ကာ ရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအချိန် ပိုင်းပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
၂၀၁၄ မေလ ၃၁ ရက်တွင် ပုဇွန်တောင်၊ တာမွေ၊ ဗဟန်း၊ လမ်းမတော်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လှိုင်၊ စမ်းချောင်း၊ လသာ၊ မရမ်းကုန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ကမာရွတ်၊ သန်လျင်၊ လှိုင်သာယာ၊ အင်းစိန်၊မှော်ဘီမြို့နယ်များရှိ ရပ်ကွက်အချို့၊ CNG ဆိုင်အချို့နှင့် စက်မှုဇုန် အချို့တွင် နံနက် ၈ နာရီမှ နေ့လယ် ၂ နာရီအတွင်းအချိန်ပိုင်း ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများရှိမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန် လ ၁ ရက်တွင် ဒဂုံအရှေ့၊ တောင်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ ဒေါပုံ၊ လမ်းမတော်၊ စမ်းချောင်း၊ မရမ်းကုန်း၊ မှော်ဘီ၊ ထောက်ကြန့်၊ လှည်းကူး၊ တိုက်ကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ အင်းစိန်၊ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်များရှိ ရပ်ကွက်အချို့ CNG ဆိုင်အချို့နှင့် စက်မှုဇုန် အချို့တွင် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအတွင်း အချိန်ပိုင်းဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများရှိမည်လည်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဓာတ်အားခွဲရုံများနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းများကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရန်၊ ဓာတ်လိုက်မှုအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန်၊ ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်မှုများ လျော့နည်းစေရန်အတွက် ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် မလွတ်သောသစ်ပင်၊ သစ်ကိုင်းများခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများ ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အချိန်ပိုင်းပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ရန်ကုန်တိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအချိန်ပိုင်းပြတ်တောက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် လူမှုရေးအခက်အခဲများအတွက်လည်း မိဘပြည်သူများကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
တူရကီ နိုင်ငံတော် တရားရုံးက အမိန့် ချမှတ် လိုက်ပြီးနောက် တူရကီ နိုင်ငံတွင်း၌ YouTube ကို ပြန်လည် အသုံးပြု နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကဗ္ဘာတွင် လူကြည့် အများဆုံး ၀က်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုဖြစ်သည့် YouTube မှာ တူရကီတွင် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လမှစ၍ အစိုးရ အရာရှိ များ ခြစားမှုကို မှတ်တမ်း တင်ထားသည် ဆိုသည့် အသံဖမ်းယူချက်များ လွှင့်တင်ခဲ့ပြီး နောက်အသုံးပြု၍ မရတော့ဘဲ ပိတ်ပင်ခံ လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပိတ်ပင်ထားခြင်း မှာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့် ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်သောကြောင့် YouTube ကို ပြန်ဖွင့်ပေးရန် တူရကီနိုင်ငံ အခြေခံ ဥပဒေ တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ် ခဲ့သည်။ တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများသို့ လည်း အကြောင်း ကြားထားပြီဖြစ်ပြီး YouTube ကို ပိတ်ပင် ထားမှုများ ပြန်ဖျက်ရန် ညွန်ကြားထား ကြောင်း သိရသည် ။
တူရကီတွင် တွစ်တာနှင့် YouTube ဆိုက်များမှာ ယခုနှစ် အစောပိုင်းကပင် ၀န်ကြီးချုပ် အာဒိုဂန်က ပိတ်ပင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ထိုဆိုက်များတွင် တူရကီစစ် အရာရှိများ ဆီးရီးယားသို့ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရေး ဆွေးနွေးနေပုံများ နှင့် မစ္စတာအာဒို ဂန်နှင့် နီးစပ်သော သူများထဲတွင် လာဘ်စားမှု များရှိနေကြောင်း စွပ်စွဲသည့် အသံဖိုင် မှတ်တမ်းများလည်း ပါဝင်သည်။ တူရကီသည် ယခုနှစ် ဆန်းပိုင်းမှ စ၍ ဆက်သွယ်ရေး အာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် မည်သည့် တရားရုံး ခွင့်ပြုချက်မှ မလိုဘဲ ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို ပိတ်ပင် ဖြတ်တောက် နိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးသော ဥပဒေ တစ်ရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည် ။ တွစ်တာကို ပိတ်ပင်ထားမှုမှာ ပြီးခဲ့သည့် လက ပြန်လည် ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
မေး - ကျွန်တော်က သမိုင်းမှာနေသူတစ်ဦးပါ။ မြို့တွင်းကို အသွားအပြန် အလုပ်သွားရသူမို့ အလုပ်ကနေ အိမ်အပြန်ကြုံရတဲ့ အခက် အခဲတစ်ခုကိုတင်ပြလိုပါတယ်။ အဲဒါ ကတော့ အပြန်လမ်းမှာ မီးမှောင်နေတာပါပဲ။ နေရာကတော့ သမိုင်းလမ်းဆုံနဲ့ ကုလားကျောင်း မှတ်တိုင်ကြားမှာ ညဘက်မှောင်နေပါတယ်။ ရန်ကုန် ဧရိယာထဲမှာပါပြီး ဒီလိုဖြစ်နေတာကို လျှပ်စစ်ကတာဝန်ရှိသူတွေ မမြင်တာလားဗျာ။ မေးပေးပါ၊၊ အမှောင်က အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်တတ်လို့မေးတာပါ။
ဖြေ - သမိုင်းသားရဲ့ အမေးရှိမှုကို ကျွန်တော်တို့က အဖြေပြန်ပေးပါ့မယ်။ ဒါက ထောက်ပြသင့်တောင်းဆိုသင့်တဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။ မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေ ကွင်းဆင်း သင့်ပြီဆို တာကို ပြလိုက်တဲ့ သဘောလည်းဖြစ်နေပါပြီ။ ရုံးမှာပဲ နေ နေကြ လို့ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်မမြင်တာကိုမေးပေးပါ့မယ်။
စိတ်ချပါ။ အမှောင်ဆိုလို့ ဖြတ် ပြောရဦးမယ်၊၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့ မြို့လယ်ကောင်မှာတောင် မှုခင်းက ဖြစ်နေတော့ မီးအလင်းရောင်က အရေးကြီးတယ်ဗျို့။ အဖြေကို ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပေး အဖွဲ့ က ဖြန့်ဖြူးရေး အတွင်းရေးမှူး ဦးတိုးအောင်က အခု လိုပဲ ဖြေပေးပါတယ်။ ”ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ စီစဉ်သွားမှာပါ။ အခုလို မေးမြန်းတာ
ကို လည်း ကျေးဇူး တင်ပါ တယ်။ လိုအပ်ချက်ကို လေ့လာပြီး ပြည်သူလူထု အဆင်ပြေဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ”
မေး - ပုသိမ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က လူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဆန္ဒပြတယ်လို့ ဂျာနယ်တွေက ရေးကြပါတယ်။ ရဲဌာနကို အခုလိုဆန္ဒပြတာက ပထမဦးဆုံး လည်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်။ တိုင်တာကို ရဲက အရေးမ ယူလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုတော့ အံ့သြမိတယ် ဗျာ။ နေပြည်တော်က ဌာနချုပ် ကို မေးပေးဖို့ ဒီကဏ္ဍ ကနေ တောင်း ဆိုပါတယ်။ မသိလို့လားသိလျက်နဲ့ မလုပ်တာလား မေးပေးပါဗျာ။
ဖြေ - အမှုတွေထဲမှာ လူကုန်ကူးမှုတွေက အဆိုးရွားဆုံး အမှုတစ် ခုလည်းဖြစ်တော့ ဒီကိစ္စက အရေးကြီးတယ်ဗျို့။ ကျွန်တော်တို့ ဆက် သွယ်ပြီးမေးပေးပါ့မယ်။ လူကုန်ကူးမှု တား ဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဗဟိုက ဒုတိယရဲမှူးကြီး ဦးခင်မောင်က အခုလို ဖြေပေးပါတယ်။
”ကျွန်တော်တို့ ဒီသတင်းကို ကြားပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တစ်ခု ပြောချင်တာက လူကုန်ကူးမှုဆိုတာက ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဒါကို အရင်သိစေ ချင်တယ်။ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေဖြစ်တဲ့ မုဒိမ်းမှု၊ လူသတ်မှု။ ဒါက ရှင်းပါတယ်။ လူကုန်ကူး ဆိုတာကို ဒီမှာ အများစု နားလည်တာက နိုင်ငံခြားကို ခေါ်သွားတယ်။ အဆင်မပြေဘူး ပြန်လာတယ်။
ဒါကို လူကုန် ကူးမှု နဲ့ ဖမ်းခိုင်းတယ်။ ဒါဆို မရဘူး။ မရတဲ့အခါ ကျန်တဲ့ အမှုပုဒ်မနဲ့ ဖမ်းလိုက်တယ်။ ဒါကိုအရေးမယူဘူးဆိုပြီး အထင်လွဲတယ်။ ဒါတွေကို တွေ့ရတယ်။ လူကုန်ကူးမှု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အာဆီယံနဲ့က အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားမှုကို အချက်သုံးချက်နဲ့ ငြိမှ အရေးယူလို့ရပါတယ်။ ဒါတောင် ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်မှုပါမှပါ။ ဒီမှာတော့ ရှုပ်ထွေးတယ်။ တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်း တယ်။ အဲဒီကနေ လူမှောင်ခိုဖြစ်တယ်။ ဒီလိုသွားတာပေါ့။ တိုင်ကြားလို့ အေ ရးမယူတာမျိုး မလုပ်ပါဘူး။ တိုင်ကြားတဲ့အခါ မှန်၊ မမှန်စုံစမ်းပြီး ဟုတ်မှသာ အရေးယူလို့ ရပါတယ်ဗျာ။
မေး - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ယာဉ်ကြောမပိတ် ဆို့အောင်ဆိုပြီးယာဉ်မရပ်ရ နယ်မြေတွေကို လုပ်ဆောင်ပေး တာ တွေ့ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ကားပိုင်မရှိလို့ ယာဉ်ရပ်ဖို့ နေရာရှားပါးနေတဲ့ ကားပိုင်ရှင်များကို မစာနာလို့ မဟုတ်ပေမယ့် ကားပိုင်ရှင်တွေရော၊ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေကပါ ရပ်ချင်သလို ရပ်၊ ရပ် ထားတာကို ဖမ်းချင်သလို မဖမ်းချင်သလို လုပ်နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါက ဘာသဘောလဲဗျာ။ အမိန့်တစ်ခုဆိုတာက စိတ်ပါမှ ထလုပ်ရတယ် ဆိုရင် မျက်နှာလိုက်တာတွေ မမျှတတာတွေ ဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာ။
ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ပြောရရင် မြေနီကုန်းမီးပွိုင့် ကွေ့ကြောနားက တက္ကစီတွေကို ပြောပါရစေ။ ရပ်ထားတာကို မဖမ်းဘူးဗျာ။ ဘာကြောင့် လဲလို့ မေးပေးပါဗျာ။
ဖြေ - တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။ မရှိရင် တည်ငြိမ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုက ရောက်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စည်းမျဉ်းတစ်ခုကို ချမှတ်သင့် တယ်လို့ ပိုင်းဖြတ်ပြီး အမိန့်ထုတ်လိုက်ရင် ပြည်သူက လိုက်နာရမှာဖြစ်သလို၊ အာဏာ ပိုင်များဘက်ကလည်း အမိန့် တည်မြဲဖို့ ဆောင်ရွက်ရပါ့မယ်။ ဒါမှလည်း အဆင် ပြေမှာပါ။
ကားတွေကို တင်သွင်းချင်တိုင်း တင်သွင်းပြီး နေရာကမရှိ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲက မလုံ လောက်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေမှု နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ သို့သော်လည်း ယာဉ်ထိန်း ရဲတွေနဲ့ မျက်ကွယ်မဟုတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုတည်းမှာဆိုတော့ ဒီအရေးကို ယာဉ်ထိန်း တပ်ဖွဲ့ခွဲရုံးက ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ဒုတိယရဲမှူးကြီး ဦးလင်းထွတ်က အခုလို ဖြေပေးပါတယ်။
”ယာဉ်တွေကို မရပ်ရမယ့်နေရာမှာ ရပ်ကြပါလို့ ကျွန်တော်တို့ မမှာထားသလို စည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့ ယာဉ်တွေကို မဖမ်းနဲ့ လွှတ်ပေးပါလို့ ကျွန်တော် မပြောထားပါဘူး။ မှာကြားမှုမလိုက်နာသူကို ကျွန်တော်တို့ အရေးယူမှာပါ”
အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု မီဒီယာဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဒီဗွီဘီ အဖွဲ့ကို ဖိတ်ပြီးမှ တက်ခွင့်မပြု
အားကစား၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာ ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့ ရောက်ရှိလာတဲ့ ဒီဗွီဘီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်း လွှတ်တော် ၀င်ပေါက်မှာ တားမြစ်ခံရပါတယ်။
အဲ့ဒီ့ အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ အားကစား ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီက ဒီဗွီဘီ အဖွဲ့အပါအ၀င် မြန်မာစာနယ်စင်းကောင်စီနဲ့ သတင်းဌာန ပေါင်းစုံက သတင်းထောက် ၂၃ ယောက်ကို ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပီး အခြားသူအားလုံး ၀င်ခွင့်ရ ပေမယ့် ဒီဗွီဘီအဖွဲ့ကို ပေးမ၀င်ခဲ့တာပါ။
လုံခြုံရေးတာဝန်ကျသူတွေကို ဘာကြောင့် အခုလို တားဆီးရတာလဲဖို့ မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အတွင်ရေးမှူး ဦးစောလှထွန်းက နှုတ်နဲ့ ညွှန်ကြားထားလို့ အခုလို တားမြစ်ရကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဦးစောလှထွန်းကို ဖုန်းနဲ့ သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ စာနယ်ဇင်းကောင်စီနဲ့ ပြည်တွင်း ဂျာနယ်တွေကို ဖိတ်ကြား ရှင်းပြအကြံပြုချက်ယူတာဖြစ်ပြီး နားလည်မှုလွဲပြီး ဖိတ်ကြားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။
လွှတ်တော်ပရ၀ဏ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ စီ ဆောင် ဒုတိယထပ် ပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေး ခန်းမမှာ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု မီဒီယာဥပဒေကြမ်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မုံရွာအကျဉ်းထောင်မှ အကျဉ်းသားတစ်ဦး ထောင်လွတ်ပြီး ၂ နာရီခန့်အကြာတွင် သေဆုံး
အကျဉ်းထောင်မှ အကျဉ်းသားတစ်ဦးသည် ထောင်မှလွတ်ပြီး ၂ နာရီခန့်အကြာတွင် သေဆုံးသွားသည့် အတွက် ထောင်မှူး ဦးစီးအရာရှိမှ ရဲစခန်းသို့သွားရောက်၍ သေမှုသေခင်းရေးဖွင့်လိုက်ရသည့် ဖြစ်စဉ်တစ် ရပ်အား မေလ ၂၉ ရက်နေ့မနက် ၁၀ နာရီက မုံရွာမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ရုံးမှ သိရသည်။
ထောင်မှလွတ်မြောက်ပြီး ၂ နာရီခန့်အကြာတွင် သေဆုံးသွားခဲ့ရသည့် အကျဉ်းသားလူထွက်မှာ ထောင်ဝင် အမှတ် မရ/ ၁၃/၀၀၉၃၀/(က) ကိုသိန်းဇော် အသက်(၂၆)နှစ် ဆိုသူဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသူသည် မုံ ရွာမြို့နယ် တရားရုံး၏ အမှုအမှတ် ၁၀၂၇/ ၂၀၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၆၃ အရ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ်(၁)ကျခံစေ ရန် စီရင်ချက် ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အကျဉ်းထောင်၏ အကျဉ်းသားမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုသူသည် မေလ ၂၉ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီအချိန်တွင် မုံရွာအကျဉ်းထောင်၌ ကျခံရန်အလုပ်နှင့်ပြစ်ဒဏ် များ ကုန်ဆုံးခဲ့သည့်အတွက် အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ ထောင်မှလွတ်မြောက် ပြီးနောက် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် အကျဉ်းထောင် တာဝန်ရှိသူများက မုံရွာပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်၍ ဆေးကုသခွင့်များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် အဆိုပါ အကျဉ်းသားလူထွက်သည် မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပေါ်တွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်း မနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်ဟု မှုခင်းဆေးစာဌာနရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ မဇ္ဈိမသို့ ပြောပြသည်။
“ သေဆုံးသူ သိန်းဇော်မှာက ထောင်ကလွတ်မြောက်လာပေမဲ့လည်း သူ့ရဲ့ မိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ သူ့မှာ အဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးလေ..” ဟု မုံရွာ အကျဉ်းထောင်ရှိ တာဝန်ကျ ထောင်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ ပြောပြ သည်။
ထောင်မှလွတ်ပြီးနောက် ၂ နာရီခန့်အကြာတွင် သေဆုံးသွားခဲ့ရသည့် ထောင်လွတ်အကျဉ်းသားတစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်၍ သေဆုံးရခြင်းအကြောင်းတရားအား သက်ဆိုင်ရာမှ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထောင်မှူး ဦးစီးအရာရှိ ဦးမောင်ထွေးက မုံရွာမြို့မရဲစခန်းတွင် တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းခဲ့ရာ ရဲစခန်းက သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၁၄/၂၀၁၄အရ ရေးဖွင့်၍ မှုခင်းဆေးပညာများအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိ ရသည်။
ဒီစစ်တမ်းမှာ လူမျိုးကြီးလေးခုဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ မလေး၊ အိန္ဒိယ နဲ့ အခြားဆိုတဲ့တာတွေကို အုပ်စု ၄ခု ခွဲတယ်။ ဗုဒ္ဓ သို့မဟုတ် တာအို၊ အစ္စလာမ်၊ ခရစ်ယာန်၊ ဘာသာမဲ့ ဆိုပြီး ဘာသာတွေအလိုက်က အုပ်စု၎ ခု ခွဲတယ်။ စစ်တမ်းကို ပါဝင်ဖြေဆိုသူပေါင်း ၁၈၂၄ ဦးအပေါ် အခြေခံပြီး တွက်ချက်ပြထားတယ်။ စစ်တမ်းပါ မေးခွန်းတွေက ရိုးရှင်းတယ်၊ ဖြေဆိုသူရဲ့ သဘောထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သိသာစေတယ်၊ ဖြေဆိုသူကိုလည်း မေးခွန်းက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲဆိုတာ သိသာအောင် သွယ်ဝိုက်တဲ့ အသုံးအနှုံးတွေ ရှောင်ပြီး စကားလုံးကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ထိထိမိမိ သုံးထားတယ်။ ဒီစစ်တမ်းမှာ အဓိက မေးခွန်းတွေက ဥပမာ – ပါဝင်ဖြေဆိုသူက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သို့မဟုတ် တာအိုဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့။ သူ့အတွက်မေးခွန်းက -
မေးခွန်း (၉) ကတော့ လူနည်းစုနဲ့ လူများစုဆိုတဲ့ majority – minority အဆင့်သတ်မှတ်ထားမှုတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ လူနည်းစု လူမျိုးကွဲနဲ့ လူများစုဆိုပြီး အုပ်စုတွေ ကွဲပါတယ်။ အဲဒီလိုကွဲတဲ့အခါ -
ဆက်သွယ်ရန် – [email protected]